India: Mitady An’ireo Ankizivavy Tsy Hita · Global Voices teny Malagasy
India: Mitady An'ireo Ankizivavy Tsy Hita
Voadika ny 19 Novambra 2018 11:39 GMT
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny Janoary 2006)
Namoaka lahatsoratra iray tao anatin'ny tatitra nivoaka tamin'ny Gazety Lancet ny BBC, mikasika an'i India, izay milaza fa ny fisafidianana mialoha ny fahaterahana sy fanalànjaza nosafidiana, dia niteraka famoizana ankizivavy miisa 500 000 isan-taona. Fantantsika tsara fa ny fitiavana hanana zazalahy dia midika fa tsy mitovy ny fanabeazana omena ireo ankizivavy, tsy ampy sakafo na tsy nahazo tombontsoa kokoa noho ireo anadahiny iray tampo aminy. Na izany aza, mampitolagaga ny isan'ireo fanalànjaza noho ny safidy. Na dia i India aza ilay firenena voalaza, miitatra ihany koa any Azia Atsimo ny olana.
Mampifandray amin'ilay lahatsoratra i Sepia Mutiny ary ahitàna adihevitra mahasoa avy amin'ireo fanehoankevitra eo amin'ilay lahatsoratra. Izay tena mahaliana dia ny tohankevitra aroson'ny Pro-Choice, sy ny zon'ny vehivavy iray hamarana ny fitondràny vohoka, satria toa mirona mankany amin'ny fanoherana ny tsy fahafahana manala zaza araka ny safidy ilay izy. Uma ao amin'ny IndianWriting manampy vaovao betsaka mikasika ilay adihevitra, amin'ny alalan'ny fanomezana rohy miaraka amin'ireo antontan'isa misy ny fifandanjan'ny lahy sy ny vavy maneran-tany.
Manana lahatsoratra tsara mikasika ilay olana ny Pickled Politics.
Tsara ny manamarika fa marobe ireo hopitaly ao Royaume-Uni, Etazonia ary ao Kanadà (ankoatra ireo hafa) no misafidy ny handà ny fangatahan'ireo ray amandreny manana eritreritra hahazo vaovao hoe lahy sa vavy ny zanak'izy ireo. Ekena fa, rehefa miaina any Andrefana, tsy sarotra ny ahitana olona hanao fandinihana. Maro amin'ireo ivontoerana britanika sy kanadiàna no nanondro manokana an'ireo vondrom-piarahamonina aziatika ho toy ny antony nahatonga ny fanapahankevitr'izy ireo hanatsahatra ny fitsirihana hoe lahy na vavy.
Mandritra izany fotoana izany, andalana ihany koa ny adihevitra mavitrika eo amin'ny LiveJournal Feminist Community mikasika an'io olana io, amin'ny alalan'ny fanasiana tsindrim-peo eo amin'ireo endrika Pro-Choice sy Pro-Life. Amin'ny fomba tsy miangatra, namoaka lahatsoratra iray ihany koa aho mikasika an'io olana io tao amin'ny Within / Without. Marobe ireo adihevitra ao amin'ny IntentBlog malaza.
Ny mampalahelo, raha ny marina dia tena mampitombo tokoa ny tahan'ny fanalànjaza ny fanabeazana… Mifandraika betsaka amin'ny fahazoana mampiasa ‘ultrasons’ ve izany? Azo inoana. Mampiseho an'ireo antony ara-tsosialy sy ara-toekarena ny tatitra, saingy manamarika fa tsy miraharaha ihany koa ny fivavahana.